Ọkachamara Semalt na Ntanetị Weebụ Weebụ - Ezi na Bad Bad
Ntanetị weebụ anọwo gburugburu ruo ogologo oge ma weere na ọ bara uru maka webmasters, ndị nta akụkọ, freelancers, programmers, ndị na-abụghị ndị mmemme, ndị na-eme nchọpụta ahịa, ndị ọkà mmụta na ndị ọkachamara na mgbasa ozi. Enwere ụdị bọọ abụọ: ezigbo bọtịnụ na ezigbo bots. Ezi bọọlụ na-eme ka engines ọchụchọ na-edepụta ọdịnaya weebụ ma nye ndị ọkachamara ahịa ahịa na ndị ahịa ahịa dijitalụ mmasị dị elu. Ngwurugwu ọjọọ, n'aka nke ọzọ, abaghị uru ma na-achọ imebi ogo ụlọ ọrụ ọchụchọ nke saịtị. Iwu iwu nke ntanetị weebụ na-adabere n'ụdị bọọlụ ị jirila.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji bọọlụ ọjọọ ndị na-ewebata ọdịnaya site na ibe weebụ dị iche iche n'ebumnuche nke iji ya eme ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị, nchịkọta weebụ nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eji ezigbo bọọlụ ma zere omume ndị na-emerụ ahụ gụnyere ịjụ njigide agha, mgbasa ozi n'ịntanetị, ịme ihe ntinye data n'ịgba mpempe, ịghachị data, mgbagha akaụntụ, n'enweghị ikike ịdọrọ ike, ọnụọgụ abụọ nke aghụghọ, na izu ohi nke ikike ọgụgụ isi, mgbe ahụ, usoro ntanetị weebụ dị mma ma nyere aka n'ịbawanye azụmahịa gị n'Intanet.
N'ụzọ dị mwute, ihe ka ọtụtụ n'ime freelancers na mmalite malitere ịhụ bọọlụ ọjọọ n'ihi na ha bụ ụzọ dị ala, dị ike na n'ụzọ zuru ezu iji nakọta data n'enweghị mkpa ọ bụla maka mmekọrịta. Otú ọ dị, nnukwu ụlọ ọrụ na-eji scrapers web web maka ọdịmma ha ma chọghị ibibi aha ha na Intanet na-eji weebụ na-akwadoghị scrapers. Echiche n'ozuzu banyere iwu iwu nke nchịkọta weebụ adịghị ka ihe ọ bụ n'ihi na n'ime ọnwa ole na ole gara aga, ọ bịara doo anya na usoro ikpe ụlọikpe gọọmenti etiti na-agbada usoro ntanetịime weebụ na-akwadoghị.
Nchịkọta weebụ malitere dịka usoro iwu na-akwadoghị azụ na 2000, mgbe eji bots na spiders wepụ ihe nrụọrụ weebụ dị ka ihe efu..Emeghị ọtụtụ omume iji kwụsị usoro a site na ịgbasa na intaneti ruo n'afọ 2010. eBay buru ụzọ debe iwu ndị mbụ megide Bidder's Edge, na-ekwu na iji bọmbụ na saịtị weebụ emebila iwu Trespass na iwu Chattels. N'oge na-adịghị anya ikpe ụlọikpe ahụ nyere iwu n'ihi na ndị ọrụ ahụ kwenyere na ọnọdụ na ọnọdụ nke saịtị ahụ ma kwụsị ọtụtụ bọọlụ dịka ha nwere ike ibibi ngwaọrụ kọmputa nke eBay. N'oge na-adịghị anya, a na-ekpe ikpe ahụ n'ụlọikpe, eBay kwụsịrị onye ọ bụla site n'iji bọtịnụ maka nchịkọta weebụ n'agbanyeghị na ha dị mma ma ọ bụ dị njọ.
N'afọ 2001, otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị njem mere ka ndị na-asọmpi kpochapụ ọdịnaya ya site na ebe nrụọrụ weebụ na-enyere ndị nledo na ndị ọjọọ aka. Ndị ọkàikpe ahụ weghachitere mpụ ahụ ma kwadoro ndị ahụ metụtara, na-ekwu na nchịkọta weebụ na iji bọọlụ nwere ike imerụ azụmahịa dị iche iche.
N'ụbọchị ndị a, maka agụmakwụkwọ, nzuzo na nzuzo, ọtụtụ ndị na-adabere na usoro ntanetị weebụ, na ọtụtụ ihe nchọgharị weebụ e mepụtara na nke a. Ugbu a, ndị ọrụ ọchịchị na-ekwu na ọ bụghị ngwaọrụ ndị ahụ niile bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, ma ndị na-abịa na ụgwọ ma ọ bụ nke mbido dị mma karịa akwụkwọ weebụ .
Na 2016, Congress gara iwu mbụ iji dozie bọọlụ ọjọọ ma kwado ezigbo bọtịnụ. Ezigbo tiketi tiketi n'ahịa (BOTS) ka e guzobere iwu nke amachibidoro iji usoro iwu na-akwadoghị nwere ike ịdebe weebụsaịtị, na-emebi ọrụ nyocha ha ma na-ebibi azụmahịa ha. Enwere ihe gbasara ikpe ziri ezi. Dị ka ọmụmaatụ, LinkedIn ejirila ego buru ibu na ngwaọrụ ndị na-egbochi ma ọ bụ na-ewepụ bọọlụ ọjọọ ma na-agba ezigbo bọtịnụ. Ka ụlọikpe na-anwa ikpebi iwu iwu nke ntanetị weebụ, ụlọ ọrụ ndị ahụ na-enwe ihe ọmụma ha Source .